ध्रुवीय - चिन्हको विशेषता
चिन्हको विशेषताहरू धनुषा धेरै विविध र कहिलेकाहीं विरोधाभास हुन्छन्। यस चिन्हमा जन्मिएका व्यक्तिहरू तिनीहरूको महत्वाकांक्षा, स्वतन्त्रता, जुनून र परिष्करणको साथ उभिरहेका छन्। तिनीहरू प्रायः अरूबाट मान्यता चाहिन्छ। धैर्य धैर्य धैर्य छ, उनीहरू झूट गर्न सक्षम छैनन्, कहिलेकाहीं कहिलेकाहीं कठिन परिस्थिति र समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति दुश्मनहरूको लागि दयालु छन्। अर्को हाइलाइटिंग विशेषता एक राम्रो अन्तर्वार्ता हो, जसले Sagittarians सफलतापूर्वक प्रयोग गर्दछ।
राशि को यस चिन्ह को प्रसिद्ध प्रतिनिधियों: वाल्ट डिज्नी, मार्क ट्वेन, फ्रैंक सिनाट्रा।
ध्रुवीय महिला - चरित्र विशेषता
उनी डोन जुआन स्कर्टमा सजिलै संग एक साझेदारबाट अर्कोतिर जान्छन्। यो महिला गहिरो भावनात्मक स्नेह को सक्षम छैन, उनको अर्को मान्छे को लागि - जीवन मा एक खुश टिकट को आकर्षित गर्ने अवसर। यो स्वतन्त्रता बिना वायुको जस्तो बाँच्न सक्दैन। उनको घमण्डलाई सान्त्वना दिन, महिला महिलालाई स्पेसलाइटमा हुनुपर्दछ। एक सुखी जीवनको लागि, उनी दर्शकलाई चाहिन्छ। यी महिलाहरूको लागि यौन सम्बन्ध संचारको रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छैन, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अन्तरक्रियाकर्ताले प्रतिज्ञाजनक साझेदार हुनुहुन्थ्यो। कहीं पनि यो एक लामो समय को लागि ढिलाइ छ, यो काम र सम्बन्ध दुवै चिन्ता। उनको सामाजिकता, हास्य र सजिलै को भाव सबै मान्छे मा प्रशंसा गर्दछ। यदि साझेदारको लागि उनको प्रेम धेरै बलियो छ भने, खालीले उनको लागि भावनात्मक विनाश हुन सक्छ। सामान्यमा, बुझ्न गाह्रो छ र नियन्त्रण गर्न अझ गाह्रो छ।
ध्रुवीकरण महिलासँग राशिको चिन्हको ज्वलंत विशेषता छ, जसले उनको जीवनका सबै पक्षहरू वर्णन गर्छ। यदि तपाईंको मित्र निरन्तर न्यायको लागि लडिरहेको छ भने, लगभग उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँले के सोच्नुहुन्छ, नतिजाको बारेमा सोच्न बिना, तपाईंलाई यो चिन्हको साधारण प्रतिनिधिमा शङ्का छैन। त्यो मान्छे र परिस्थितिहरू आदर्श गर्न इच्छुक छैन, त्यसैले प्रायः यी स्त्रीहरू पुराना जेठा हुन्छन्। तिनीहरूको जीवन मिशन संसारलाई अझ राम्रो बनाउन सबै सम्भव छ। क्यारियरवादी होइन, केवल एक्लो आवश्यक स्वतन्त्रताको लागि पैसा कमाउँछ। गर्वको कारणले, उनीहरूलाई कहिलेकाहीं सबै भन्दा आवश्यक परिस्थितिहरुमा सहयोगको लागि सोध्न चाहँदैनन्।
एक महिलाको लक्षण प्रेममा धनुषा
उनी विश्वास गर्छन् कि व्यक्तिगत जीवनले जनतालाई हानिकारक पार्दैन, त्यसैले अक्सर प्रायः सम्बन्धित हुन इन्कार गर्दछ, समयको कमीलाई बुझाउँछ। यद्यपि आत्मा सजिलै नराम्रो छ, धेरै छिटो छ, भले पनि तुरुन्तै शोध हुँदैन, सबै रात सम्म तकियामा रोउन सक्छ। उनको लागि स्वतन्त्रता व्यक्तिगत खुशीको रहस्य र पुरा परिवारको भलाइ छ।
धैर्य व्यक्ति - विशेषता र अनुकूलता
उहाँ सँधै आत्मामा जवान हुनुहुन्छ र उहाँका वरिपरि खुल्ला हुनुहुन्छ। त्यस्ता पुरुषहरू उपन्यासहरूमा रुचि राख्छन् र सधैँ लहरको किरणमा हुन्छन्। भाग्य को छोरीहरु लाई एकदम राम्रो तरिकाले कठिन परिस्थितिहरु बाट बाहिर आउँदछ। सीधापनको कारण तिनीहरू कहिलेकाहीं अशिष्ट लाग्छन्, तर लामो समयसम्म तिनीहरूसँग रिस गर्न असम्भव छ। महिलाहरुको लागि स्वतन्त्रता पुरुषहरुको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। विवाह उनको व्यक्तित्वको लागि सम्भावित खतरा हो। संगतता:
मेष - सम्बन्ध धेरै भावनात्मक र सुन्दर छ;
वृषभ एक अत्यन्त विरोधाभासी गठबन्धन हो, जुन सम्भवतः सम्झौताको लागी सम्भव छ;
जुत्ताहरू - प्रेममा स्वतन्त्रता जस्तै समान छन्, यसैले सम्पत्ति र निष्ठाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ;
क्यान्सर एक दुर्लभ संघ हो, किनकि साझेदारसँग जीवनमा विभिन्न लक्ष्यहरू छन्;
लियो - एक युगल जसमा प्रत्येक पूरै एक अर्का;
Virgo - एक निराशाजनक सम्बन्ध;
तराजू - विवाह सम्भव छ, पूर्ण यौन अनुकूलताको आधारमा।
वृश्चिक - आफ्नो ईर्ष्यालाई रोक्न सक्षम हुदैन, त्यसैले धनुषा भविष्य भविष्यमा देख्न सकिदैन जुन स्कोरियोियो चाहिन्छ;
धनुषा - सबै कुरामा एक आदर्श गठबन्धन;
मकरिया - एक महिलाले मानिसलाई स्थिरता र सान्त्वना दिनेछ, एक व्यक्तिले उनीहरूलाई बोरिंगबाट विचलित गर्नेछन्;
Aquarius - एकदम असाध्य गठबन्धन;
मीन - यस संघमा केटी अकेला महसुस हुनेछ, र धैर्यता बुझ्दैन किन।
मानिसको चरित्र प्रेममा धैर्यता
यस्तो ट्राफिकको रूपमा बलियो यौन दृष्टिकोण महिलाहरूको प्रतिनिधिहरू। तिनीहरू स्वतन्त्रतालाई माया गर्छन्, त्यसैले तिनीहरूका साथ तिनीहरूको जीवन निकै गाह्रो छ। एक केटी जो चारैतिर हुन चाहने सबै धैर्य धैर्य हुनु पर्छ सबै मनोदलीहरु लाई बचाउन को लागी कि सामंजस्य अक्सर प्राय।
कार्नेलियन पत्थर - जादुई गुणहरू, राशिको चिन्ह
कसरी एक मकवान व्यक्तिलाई जित्ने?
मित्रतामा राशि लागी संगतता
तपाईं कसरी एक मानिस मकरिया जस्तै बुझ्नुहुन्छ?
वृश्चिक पुरुष - उसले के गर्छ जब उसले मनपर्छ?
राशि राशि चिन्ह लगाउनुहोस् - विस्तृत विवरण र अन्य लक्षणहरूसँग अनुकूलता
तुरुन्तै र भाग्य - प्रेममा संगतता
पुरुष वृषभ कसरी फर्काउने?
Zirconium पत्थर - गुण, राशि चक्र
राशिको चिन्ह द्वारा फूल
लियो र कनगो - प्रेम सम्बन्ध, मित्रता र कामको संगतता
संगतता - महिला ले पुरुष पुरुष
राशिको सबैभन्दा सेक्सी चिन्ह
तिनीहरूले कसरी चक्र चिन्हहरू पिउँछन्?
कंगन बनेको कंगन "Quadrofish"
नवजातको लागि शास्त्रीय संगीत
यी 25 चार सशस्त्र पुरुषहरूले सोचेका थिए कि उनीहरूले आफ्ना स्वामीहरूलाई उत्तम उपहार ल्याएका छन्!
बिल्ली, जुन दुई खुट्टा छ, कङ्गारू जस्तै छ!
उच्च कमरसँग शर्ट
बेबी बिस्कुटहरू - सानाहरूलाई लागि मिठाईको सबैभन्दा राम्रो व्यञ्जन
स्टाइल आइकन 2014
चर्चको Agios Andronikos
फर संग बुना भयो टोप
बालबालिकामा बगाएको छाला
Soborany राष्ट्रीय उद्यान
बेडरूममा लफ्ट शैली
मसुले कसरी खाना खान्छ?
लुगामा सिमहुलेटको प्रकार
एक अपार्टमेंट को लागि जैव फायरप्लेस
भेडा र भेडा - संगतता
Verbena - बीउ बाट बढ्दै
पूर्व-अंगगार्ड लेडी डे केथ मिडलेसन संग सहानुभूति गर्दछ
यसले किन धेरै पैसा कमाउँछ?